Myanmar music - Download Facebook Videos - BajarFB.com
FB URL: https://www.facebook.com/MyanmarMusicforyou/
ဆရာနိုင်ကိုနိုင်ရေးတဲ့ "မျှော်တော်ယောင်မင်းသမီး" နားဆင်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါအုံး ချစ်သူငယ်ချင်းတို့🤗🤗🤗 ဒီသီချင်းလေးက ခွေထွက်ရှိထားချင်မရှိပါ ကြိုက်နှစ်သက်သောသူငယ်ချင်းများ Like & Share လုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ခွင့်​မ​တောင်း​ပေမယ့်​ရပါတယ်​ ~~~ ချစ်​သု​ဝေ mp3 link https://yadi.sk/d/V025SfR43a3wPo
ဂီတာတီး​ပေါ့ကိုကိုရယ်​ ~ စုရတနာ
မျက်​ရည်​မိုး ~~~ ဖြိုးပြည့်​စုံ mp3 link https://yadi.sk/d/DQEayFA93ZwpaE
ဆွတ်​ချူလှည့်​ပါ ~~~ ရတနာစု
အ​ပြောင်းအလဲ ~~~ ​ဆောင်းဦးလှိုင်​ mp3 link https://yadi.sk/d/y8nICFdL3ZtvqN
ထာဝရအ​ဖော်​ စည်​သူလွင်​ တင်​ဇာ​မော်​ ​ချောစုခင်​ https://yadi.sk/d/FsmDJ_VO3ZsXwN
*** သူစိမ်း - မိဖူး ရဲ့ သီချင်းလေး *** ဒီသီချင်းလေး ကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် Share ပေးကြပါဦး
လိုက်​ခဲ့မယ်​ အချစ်​​ရေ. ~~~ နွဲ့ယဉ်​ဝင်း mp3 link https://yadi.sk/d/FzYME7JI3Zn3nK
မီမီဝင်း​ဖေ - အချိန်​​တွေလိုဦးမယ်​ https://drive.google.com/file/d/10q6r_mhBf2QIKmps7l0GpipJH-cenBwF/view?usp=drivesdk
စီးကရက်​ကိုကြိုက်​တတ်​ရင်​ စီးကရက်​မီးခိုး မျက်​​စေ့ထဲဝင်​တာ​လောက်​​တော့ ခံနိုင်​ရည်​ရှိပါတယ်​. မင်းက​လေးကို ချစ်​လွန်း​တော့​လေ.. ​ဂျေ​မောင်​​မောင်​ - သိပ်​ချစ်​လွန်း​တော့လည်​ https://yadi.sk/d/LJR0C26T3ZgHTk
"မောင့်ကိုလွမ်းတဲ့မလွမ်းဝေ" တေးရေး - နိုင်ကိုနိုင် တေးဆို - စုရတနာ ဂီတမှူး - ရဲထက်အောင် မူပိုင်တေးသီချင်းလေးမို့ နားဆင်ခံစား ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအုံး ချစ်သူငယ်ချင်းတို့🎼🎧🎧🎧🎧🎧🎧
မိဖူးရဲ့ #သူစိမ်း သီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် New Version ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်Version ပါ နားထောင်လို့ရအောင် mp3 Link မှာ နှစ်ပုဒ်လုံး ထည့်ပေးထားပါတယ် https://www.mediafire.com/folder/bzr1dz4ucpmf8/Mi Phoo - သူစိမ်း (Down beat & New Version)
၀န်​ခံလိုက်​​ပေါ့ မင်းချစ်​တယ်​ဆိုလည်း... ဒီတခါမလှည့်​စား​တော့နဲ့.. ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းပြပြီး ငြင်း​နေမှာလဲ.
​ရွှေလက်​တွဲ ~~~ ​ကောင်းပြည့်​ mp3 link https://yadi.sk/d/a2YUDrvU3ZWzm8
​ဝေးရပြီ အချစ်​​ရေ ~~~ စုရတနာ
Song Title.. Wo Men Bu Yi Yang (​ဝေါ်မန်းပုယိယန့်​) ​လောကမှာ ညီအကိုလို ချစ်​ခင်ကြတဲ့ သူငယ်​ ချင်း​ကောင်း ဟာ ဘယ်​​လောက်​အ​ရေးကြီးသလဲဆိုတာ ဒီသီချင်း ​လေးကိုနား​ထောင်​ပီး သိသာထင်​ရှား​စေမှာပါ။ Admin က​တော့ ​တော်​​တော်​ကြိုက်​တယ်​. Translated By Aye mi( Tian Xian) Video Credit👉Basic Study Chinese Online Course Via Aung Thike Mon
ခံစားခြင်းရဲ့ အစွန်းနှစ်​ဖက်​​ရောက်​ ​လောင်​ကျွမ်း​သောအပူမီး အချစ်​ရဲ့ဒုက္ခမီးက ကျွမ်း​လောင်​သွားခဲ့.. အရှည်​ဆုံးခရီးက မဆုံး​သေးသမျှ ​လောင်​ကျွမ်းခြင်း ဘယ်​ရပ်​မှာလဲ.. အသည်းကွဲအနမ်း https://yadi.sk/d/LPYnKXlr3ZRVLt
မင်းထားခဲ့တဲ့အတိတ်​မှာငါ မ​နေ​ပျော်​နိုင်​ဘူး​လေ အ​ဖြေရှာမရဘူးချစ်​သူရယ်​ ငါ့ဘ၀အဓိပ္ပါယ်​မဲ့ ဆိုင်းမိုင်​ - ​နောက်​ဆုံးအနမ်း https://yadi.sk/d/KFek-Wje3ZRTAR
ဖြိုးလျှံဟိန်း - နွယ်​ပင်​ https://yadi.sk/d/miBy8L9f3ZR62m
ဂ​ရေဟမ်​ ​ချောစုခင်​ - နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ်​ https://app.box.com/s/8r7axnsz0usnsfjj6i8lzxei3kyd7scr